30 Sep 2010 Yeyintnge'sDiary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/30/20100အကြံပြုခြင်း
(၂) လူတိုင်းသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ညီမျှစွာ ရယူခံစားပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
‘အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း’ သည် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စံပြုသတ်မှတ်ထားသော အခြေခံ ကတိက၀တ်များလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ‘ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်’ (UN International Convenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ၏ အပိုဒ် (၂၅) တွင်လည်း “နိုင်ငံသားတိုင်းအား ခွဲခြားကန့်သတ်မှု မရှိစေရဘဲ ‘မဲပေးခွင့် အခွင့်အရေးနှင့် အခွင့်အလမ်း’ ရှိစေရမည်ဖြစ်ပြီး ‘ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်’ လည်း ရှိစေရမည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၆၀ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သော တတိယအကြိမ် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသည့်နောက် ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲကျင့်စဉ်များနှင့် ကင်းကွာနေခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၅၀) ခန့်ရှိခဲ့ပြီ။ ဗိုလ်နေ၀င်း ဦးဆောင်ရေးဆွဲသော ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရ ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲများမှာမူ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ငြင်းပယ်ဖျက်သိမ်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲများဟု သမိုင်းတွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံက ယှဉ်ပြိုင်သူမရှိ တဦးတည်းပြေးကာ ပထမရရှိသော (မဆလ) တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို မွေးထုတ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွင်လည်း အားနည်းချက် (သို့မဟုတ်) ညစ်ကွက်တခု တွေ့ရသည်။ ယင်းညစ်ကွက်မှာ ‘ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ’ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် အချိန်ကာလမည်မျှ အတောအတွင်း မည်သို့မည်ပုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို အသက်ဝင်စေမည်ဟု ဖော်ပြမထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးခြင်း၏ ပဓာနကိစ္စလည်းဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်ကို ထည့်သွင်းမထားခြင်းသည် “အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများက နိုင်ငံသားများ၏ ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်ကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုရမည်။ ̏ မဲအရေအတွက် ပြည့်မီသည့် အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်များအား သက်ဆိုင်သည့် အခွင့်အာဏာကို အပ်နှင်းရမည်˝ ဆိုသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများအား လျစ်လျူရှုထားကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။
နိုင်ငံတကာ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်များအရ ‘ရွေးကောက်ပွဲစနစ်’ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတခုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကို လျှော့ကျအောင်လုပ်သည့် ကိရိယာဟု ဆိုထားသည်။ (မဆလ) တပါတီစနစ်သည် “ငါနှင့်မတူ ငါ့ရန်သူ” သဘောထားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲများကို တဖက်သတ် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကို လျော့ပါးအောင် လုပ်ရမည့်အစား တိုးပွားအောင်လုပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော၊ ပြည်သူများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေး လိုလားသော တိုင်းရင်းသားများ၏ ဆန့်ကျင်မှုကို အဆက်မပြတ် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ လူထုအရေးတော်ပုံကာလ၌ ချုပ်ငြိမ်းခဲ့ရသည်။ စင်စစ် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နှင့် ဖြစ်စဉ်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေသည် တိုင်းပြည်တပြည်၏ သာယာဝပြောရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အခရာကျပေသည်။
● နိုင်ငံရေးပါတီများတည်ထောင်ခွင့်ကို လေးစားအသိအမှတ်ပြု၍ ပါတီအားလုံးကို ဥပဒေရှေ့မှောက်၌ တန်းတူ အခွင့်အရေးများပေးကာ ယှဉ်ပြိုင်စေရမည်။ အာဏာပိုင်များက ပါတီအားလုံးကို မခွဲမခြား တန်းတူဆက်ဆံရမည်။
● ပါတီများအား လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသော ၀န်းကျင်တွင် နိုင်ငံရေးစည်းရုံးမှုများ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးရမည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများအပေါ်၌ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ်၌ဖြစ်စေ၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအပေါ်၌ဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင်များက မလျော်မကန်ပြုမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ လက်စားချေမှုများ ပြုလုပ်မည်ကို ကြောက်ရွံ့နေရသည့် အခြေအနေများ မရှိစေရ။
သို့သော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုပအို့ဝ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းပြည်ကိုးကန့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ အစရှိသည့် (၅) ပါတီကို မှတ်ပုံအသစ် ထပ်မတင်၍ဟုဆိုကာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စက်တင်ဘာ (၁၄) တွင် တရားမ၀င်ပါတီများဟု ကြေညာခဲ့သည်။ တဖန် အသစ်ထူထောင်သည့် ပါတီများအနက်မှလည်း ပြည်ထောင်စုကရင်အမျိုးသားမျာအဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်၊ မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ပြည်) များကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦး မ၀င်နိုင်၍ဆိုကာ ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။
ပိုဆိုးသည်မှာ ကချင်ပြည်နယ်တိုးတက်ရေးပါတီ (KSPP)၊ ညီညွတ်သော ဒီမိုကရေစီပါတီ (ကချင်ပြည်နယ်) (UDP)၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တိုးတက်ရေးပါတီ (NSSPP) တို့ကို အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင်မာမာမပြဘဲ ပါတီထူထောင်ခွင့် မပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီများ တည်ထောင်ခွင့်ကို လေးစားအသိအမှတ်မပြုခြင်း၊ ပါတီအားလုံးကို ဥပဒေရှေ့မှောက်၌ တန်းတူအခွင့်အရေးများ မပေးခြင်းကို ပေါ်လွင်စေသည်။ ထိုမျှမက ယင်းပါတီများမှ ကချင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များက ပါတီထောင်ခွင့်မရသဖြင့် တသီးပုဂ္ဂလအနေဖြင့် ပါဝင်ရန် လျှောက်ထားခြင်းကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပယ်ချခဲ့ပြန်သည်။ ထိုလုပ်ရပ်မှာလည်း “လူတိုင်းသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အစိုးရဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်များမှ တဆင့်ဖြစ်စေ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။” ဆိုသော ‘အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း’ ပါ သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိအခင်းအကျင်းအရ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက အာဏာလက်ရှိ စစ်တပ်ပါတီဖြစ်၍ နိုင်ငံ့ငွေကြေးဘဏ္ဍာများနှင့် နိုင်ငံပိုင် ဆက်သွယ်ရေးယန္တရားများကို အကန့်အသတ်မရှိ ရယူသုံးစွဲကာ လွတ်လပ်စွာ မဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောခွင့်ရနေသည်။ ယခုကြံ့ဖွံ့ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စာစောင်ကို ရောင်စုံ (၈) မျက်နှာ စောင်ရေ (၁) သိန်း ရိုက်နှိပ်၍ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေနေသည်။ ကာလပေါက်ဈေးထက် တ၀က်လျှော့တွက်လျှင်ပင် ကျပ်ငွေ (၅) သန်းလောက်ရှိမည်။ စိစစ်ဖြတ်တောက်မှာလည်း မပူရ။ အခြားပါတီများမှာ စာပေစိစစ်ရေး၏ စည်းကမ်းများကို ကြောက်နေရသည်။ စာစောင်ထုတ်ဝေခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သည့် ပါတီက အများစု။ သို့ဖြင့် သတင်းမီဒီယာကို အကန့်အသတ်ခံရသည်။ လွတ်လပ်စွာ တန်းတူအသုံးပြုခွင့်မရ။ ရေဒီယို၊ တီဗွီကျပြန်တော့လည်း ပါတီတခု (၁၅) မိနစ်သာ ပေးသည်။ အကန့်အသတ် စည်းမျဉ်းက အတန်တန်။ (၁၅) မိနစ်မျှနှင့် ကိုယ့်ပါတီမူဝါဒကို လူထုနားလည်အောင် ပြောခိုင်းသည်မှာ မည်ကာမတ္တပေးသည့် မဲဆွယ်ခွင့်သာဖြစ်သည်။
ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် (၃၃၀)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် (၁၆၈)၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် (၆၆၀)၊ စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ် (၁၁၅၈) ဦးအတွက် ပါတီများ ပြိုင်ဆိုင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးလျှင် မှတ်ပုံတင်ကြေး (၅) သိန်း တင်ရမည်ဟု စစ်အာဏာပိုင်တို့က ညစ်ပတ်လိုက်သည်။ ဤငွေကြေး အဟန့်အတားကြောင့် အခြားအတိုက်အခံပါတီများထဲမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂၀၀) ပြည့်အောင် ၀င်ပြိုင်နိုင်သည့် ပါတီမရှိ။ ကြံ့ဖွံ့က နေရာအားလုံးပြိုင်သည်။ တစညက နေရာ (၉၈၀) ကျော်ပြိုင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ခင်ကပင် အဖြေက ထွက်နှင့်နေပြီ။ အတိုက်အခံအတွက် နေရာမရှိသည့် လွှတ်တော်၊ ကက်ဘိနက်ဖွဲ့ခွင့် မရှိသည့် လွှတ်တော်၊ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သည့် စစ်ဗိုလ်သမ္မတက ပြဋ္ဌာန်းလိုသည့် ဥပဒေများကို အတည်ပြုပေးရမည့် ရုပ်သေးလွှတ်တော် မျှသာဖြစ်သည့် အချက်ကို မျက်ကွယ်ပြုလျက် လွှတ်တော်တက်ရန် စိတ်ကူးယဉ်ကြသူများ ရှိနေသည်။
မဲစာရင်းများလည်း တပြည်လုံးတွင် စနစ်တကျ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းမရှိ။ မဲစာရင်း ကူးယူလိုသည့် ပါတီများကိုလည်း တမျက်နှာ (၂၀၀) ကျပ် ပေးရမည်ဟု ငွေကြေးနှင့် ပိတ်ဆို့လိုက်ပြန်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုကို ကန့်ကွက်ဖို့က ပို၍ပင် ခက်ခဲသေးသည်။ ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းတင်မှ ကန့်ကွက်ခွင့်ရမည်ဆိုသည်။ ဤမျှ မတော်မတရား ညစ်ပတ်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်များမှာ ယခုမှ အစပျိုးကာစသာရှိသေးသည်။ နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်နီးလာလေ ညစ်ပတ်ကောက်ကျစ်မှုများ ပို၍ ပို၍ များလာလေဖြစ်ဖို့ သေချာသည်။ အညစ်ပတ်ဆုံးကိစ္စကိုလည်း မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်နေရပြီးဖြစ်သည်။ စစ်တပ် (၄) ပုံ (၁) ပုံ ယူပါရစေဆိုသည်ကို သဘောတူလိုက်သဖြင့် ယခု ကြံ့ဖွံ့စစ်တပ်ပါတီ ထပ်ဖွဲ့ကာ စစ်တပ်က လွှတ်တော်များတွင် (၄) ပုံ (၃) ပုံ မက အပိုင်စီးတော့မည်။ လွှတ်တော်ထဲတွင် political space ရှာမည်ဆိုသူများ ယခုထိ သဘောမပေါက်သေး၊ အရှည်ကို မမြင်နိုင်သေးသည်မှာ အံ့စရာဟု ဆိုရတော့မည်။
စင်စစ် စစ်အုပ်စု မလျော်မကန် ကြံစည်နေသော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၏ အဓိက ပစ်မှတ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အခန်းကဏ္ဍကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ဖြင့် စစ်အုပ်စုက ချေဖျက်ရန် လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မူလရည်ရွယ်ချက် ကိုယ်၌က မရိုးသားသည့်အလျောက် စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် “နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ” စသည်တို့သည် ‘ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆန့်ကျင်ရေး စီမံချက်’ ဖြစ်နေကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးအကဲခတ်များက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အတုအယောင်ဟု အကဲဖြတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိက အတိုက်အခံ NLD ကို ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မပေးလို မပေးရဲသည့် သဘော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လူထုက ထပ်မံရွေးချယ်မည်ကို ကြောက်လန့်နေသည့် သဘောက ပေါ်လွင်လွန်းသည်။
သို့တစေ NLD သည် လူထုတိုက်ပွဲအတွင်းမှ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည့် လူထုပါတီဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်အလိုကျ ပါတီမဟုတ်သဖြင့် အာဏာရှင်က အသိအမှတ်မပြုရုံနှင့် NLD ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်။ လူထုအကျိုးကို မဆောင်နိုင်တော့၍ လူထုက အသိအမှတ်မပြုတော့လျှင်သာ ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်သည်။ NLD က ပါတီမှတ်ပုံမတင်၊ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ဟု ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းမှာ စစ်အာဏာကို အာခံဆန့်ကျင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မတရားသည့် အမိန့်အာဏာကို ဖီဆန်ခြင်း (Civil Disobedience) ဖြစ်သည်။ NLD ၏ အမြင့်ဆုံး သပိတ်တိုက်ပွဲ ပုံသဏ္ဍာန်လည်းဖြစ်သည်။ NLD သည် တိုက်ပွဲအတွင်း၌ ဆက်ရှိနေသည်။ စစ်အာဏာကို သိဒ္ဓိတင်ပေးရမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှန်းသိသိနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြသူများသာ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ စည်းအပြင်၌ ရောက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်သူအများကမူ ထိုမျှလောက် မေ၀၀ါးကြ။ တပ်ဦးပါတီများဖြစ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) တို့၏ သပိတ်တိုက်ပွဲခေါ်သံကို စတင်ထောက်ခံလာနေကြပြီ။ ယနေ့ပြည်သူသည် နိုင်ငံရေးစိတ်မ၀င်စားသော ပြည်သူမဟုတ်။ စစ်အာဏာရှင်သည် ပြည်သူကို နိုင်ငံရေးစိတ်မ၀င်စားရဲအောင် အကြီးအကျယ် ရက်ရက်စက်စက် ဖိနှိပ်ခဲ့သည်။ မအောင်မြင်ခဲ့။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/29/2010 1 အကြံပြုခြင်း
29 September 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/29/20100အကြံပြုခြင်း
မြန်မာစစ်အစိုးရ နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်
By ဦးသန်းလွင်ထွန်း သောကြာ, 24 စက်တင်ဘာ 2010
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကြီး ကျင်းပနေတဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့ဖို့ကိစ္စကလည်း အများအားရုံစိုက်နေတဲ့ ကိစ္စတရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ ကိစ္စကို Australia, Britain, Czech republic, Slovakia, American, Canada, Hungary, New Zealand နိုင်ငံတွေကလည်း ထောက်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို နိုင်ငံတကာက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အထိ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့ နေရာမှာ အတိုင်းအတာဘယ်လောက်အထိ ခရီးရောက်နေပါပြီလဲ။ နောက် ဘယ်လိုအရာတွေက အကန့်အသတ် အဟန့်အတားဖြစ်နေသလဲဆိုတာတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ဒီကိစ္စမှာ ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်၊ ကုလသမဂ္ဂအရေး ကျွမ်းကျင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွှန့်ပေါင်း အစိုးရရဲ့  ကုလသမဂ္ဂရေးရာ တာဝန်ခံ ဒေါက်တာသောင်းထွန်း ကို မခင်ဖြူထွေး က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါက်တာသောင်းထွန်း ။ ။ ကျနော်တို့ ဗမာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ခန့်အပ်ထားတဲ့ မစ္စတာ ကင်တားနား ကိုယ်တိုင်က ဗမာပြည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေထဲမှာ လူသားတရပ်လုံးကို ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့ ကျူးလွန်မှုမျိုးတွေ၊ စစ်ရာဇဝင်မှုတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သတင်းအထောက်အထား အချက်အလက် တော်တော်များများ လက်ခံရရှိတယ်။ ရရှိပြီးတော့ ဒါတွေကို စုံစမ်းလေ့လာဖို့အတွက် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် လိုအပ်တယ်လို အကြံပြုချက်ကို ၂၀၁၀ မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးကို တင်သွင်းတဲ့ သူ့အစီရင်ခံစာမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဟာ ပထမဦးဆုံး။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကျွမ်းကျင်သူတွေ ခန့်အပ်လာတဲ့နေရာမှာ ပထမဦးဆုံး အကြံပြုမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ တောက်လျှောက် ဗမာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူတွေကို တင်ပြခဲ့ပေမယ့် ဒါ ပထမဦးဆုံး ဖြစ်လာလို့ပါ။ ကျန်တာကတော့ အခုဆိုလို့ရှိရင် ဗမာနိုင်ငံမှာ အခုလိုမျိုး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုမျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဥပဒေပညာရှင်ပိုင်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကရော၊ နောက်တခုက တရားသူကြီးတွေ နိုင်ငံတကာက ဂုဏ်သရေရှိ သိက္ခာရှိတဲ့ တရားသူကြီးတွေပိုင်းကလည်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတဲ့ အပိုင်းတွေ ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ နောက် ကုလသမဂ္ဂ ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာလည်း special rapporteur အဖြစ်နဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Professor Mr.Yozo Yokota၊ Professor Paulo Sergio Pinheiro တို့ ကလည်း ကင်တားနားရဲ့  အကြံပြုချက်ကို ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ လက်ခံကြောင်း ဖော်ပြကြပြီးတော့ သူတို့အနေနဲ့လည်း တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း ပြောနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ယနေ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ရရှိလာတဲ့ ရလဒ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဖြူထွေး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ တကယ်တမ်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လာတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ချေ ဘယ်လောက်အထိ ရှိလာမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးပေးပါရှင့်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ တရုတ် နဲ့ ရုရှား တို့လို မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ပုံမှန်ဆက်ဆံနေတဲ့ နိုင်ငံတွေက လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဗီတိုအာဏာသုံးပြီး ပယ်ချနေကျဆိုတော့ အခုကိစ္စမှာရော သူတို့ရဲ့  ဗီတိုအာဏာကိုကျော်ပြီး ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါမလဲရှင့်။
ဒေါက်တာသောင်းထွန်း ။ ။ ဖြစ်နိုင်ချေကို မေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကုလသမဂ္ဂမှာ အထူးသဖြင့် လုံခြုံရေကောင်စီကို ဖြတ်ပြီးတော့ လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာ စဉ်းစားချက်က ဒီကိစ္စတခုကို စဉ်းစာတာ အခြေခံ (၂) ချက် ရှိပါတယ်။ ပထမက နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအကြောင်းအရ မှန်ကန်မှုပေါ့။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအကြောင်းအရ အကြုံဝင်မှုပေါ့။ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းအရ အကျူံးဝင်မှုပေါ့။ ဒါကတော့ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့။ ဒုတိယက နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ ရှိမရှိ။ ဆိုလိုတာက နိုင်ငံရေးအရ ထောက်ခံမှု။ အထူးသဖြင့် အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့  ဘုံအကျိုးစီးပွားတွေ ညီညွှတ်လာမှု ရှိမရှိပေါ့။ ဒီကိစ္စတခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လိုတော့ ဥပဒေအကြောင်းအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗမာနိုင်ငံ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီဖွဲ့ဖို့ကိစ္စမျိုးတွေ ဒါတွေက ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ တော်တော်လေး အကြုံဝင်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ တွေ့ရပြီ။ နိုင်ငံရေးအရ ဆန္ဒရှိမရှိ ထောက်ခံမှုပိုင်းမှာ သေချာတယ် တရုတ်၊ ရုရှား ဗီတိုပါဝါ (Veto Power) ရှိတဲ့ (၂) နိုင်ငံက ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ ဒါကို ကျနော်တို့ ကျော်ဖြတ်ကြရအုံးမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ အချိန်ယူဖို့ လိုပါတယ်။
ခင်ဖြူထွေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်လို နိုင်ငံမျိုးကြတော့ သူကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံအတွင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေလည်း ရှိနေတယ်။ နိုင်ငံတကာက ဘာပဲပြောပြော ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် သိပ်ပြီးတော့ ဂရုစိုက်တဲ့ နိုင်ငံမဟုတ်တော့ တရုတ်ရဲ့  ဗီတိုကို လွန်ဆန်ဖို့ လွယ်ပါ့မလားရှင့်။
ဒေါက်တာသောင်းထွန်း ။ ။ ဗီတို သုံးတယ်ဆိုတာလည်း ဗီတိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ record ရှိတယ်။ ဒီ နိုင်ငံက ဘယ်နှစ်ခါ ဗီတို သုံးသလဲဆိုတာပေါ့။ ဒါတွေကိုတော့ တစုံတရာ အလေးထားဖို့တော့ ရှိတယ်။ ခဏခဏ ဗီတို သုံးတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့  မှတ်တမ်းက မကောင်းတဲ့ သဘောလည်းရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဥပမာ ဆူဒန် (Sudan) ကိစ္စပေါ့။ ဆူဒန်ကိစ္စဆိုရင် ဆူဒန်မှာ တရုတ်ရဲ့  ရေနံ အပါအဝင် စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားတွေ တော်တော်များများ ရှိတယ်။ ရှိတဲ့ကြားထဲက အခုနပြောတဲ့ အချက်အလက်တွေရဲ့  ပေါင်းစုံမှု၊ ဆူဒန်ရဲ့  အရေးပေါ် အခြေအနေ၊ ဆူဒန် က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ဥပဒေအရ အကြုံဝင်မှု၊ တကမ္ဘာလုံးက ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းမှု။ ဒီဟာတွေ ပေါင်းစုံလာတဲ့အခါမှာ တရုတ်အနေနဲ့ လက်ရှောင်ပေးရတဲ့ သဘောတွေရှိပြီး ဆူဒန်မှာဆိုရင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တွေ စေလွှတ်ရတဲ့အပိုင်းတွေ ရှိတယ်။ ဗမာပြည်ကိစ္စမှာတော့ သေချာအောင်ပြောချင်တာက လောလောဆယ်အဆင့်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့  မျှော်လင့်ချက်က အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ရေး၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားမျှတမှုကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲအပိုင်းမှာ လမ်းပေါက်ပေါင်းစုံ ဖွင့်ထားပါတယ်။ ICC တခုတည်းလုပ်မယ်၊ နိုင်ငံတကာတရားရုံးကို တင်မယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းဆုံးဖြတ်ထားတာ အများစု တချို့ တော့ရှိတာပေါ့ အနေနဲ့ကတော့ တရားမျှတမှု ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ လမ်းကြောင်းပေါင်းစုံကနေ စဉ်းစားမယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရှုထောင့်ကလည်း စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ရှင်းအောင်ပြောချင်ပါတယ်။
ခင်ဖြူထွေး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆူဒန်ကိစ္စနဲ့ ဒေါက်တာသောင်းထွန်း နှိုင်းယှဉ်တဲ့နေရာမှာ ဥပမာ ဆူဒန်ကိစ္စမှာ တရုတ်က ခေါင်းရှောင်လိုက်တဲ့ ကိစ္စပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလို အနေအထားမှာတော့ ဆူဒန်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ ရပါမလားရှင့်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆူဒန်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေ မတူတာတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဆူဒန်ကိစ္စမှာ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့  ထောက်ပံ့မှုကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဥပမာ ငွေရေးကြေးရေးကအစ ထောက်ခံမှု အများကြီးရခဲ့တာမျိုး ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရတဲ့အရာမျိုးပေါ့။ ဒီလို အနေအထားတွေ ကွာခြားမှုရှိတဲ့နေရာမှာ ဆူဒန်မှာ တရုတ်က မဖြစ်မနေ ခေါင်းရှောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စမှာတော့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား လို့။ နောက်တခုက အခုကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာစစ်အစိုးရကို နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးအောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ ပုံစံတွေအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ တချို့ ရလဒ်အားဖြင့် တစုံတရာ မရှိတဲ့အခါမှာ ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အခါမျိုးမှာ လူတွေကို စိတ်ဓါတ်ကျစရာ နောက်ထပ်ပေါင်းပေးလိုက်တာမျိုး ဖြစ်မသွားဘူးလားရှင့်။ အဲဒါတွေလည်း ဆွေးနွေးပေးပါအုံး။
ဒေါက်တာသောင်းထွန်း ။ ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်တာတွေကို မှန်းဆပြီးတော့ လုပ်ကြရတာပေါ့။ အဲဒီတော့ အခုနပြောတဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ အကျိုးစီးပွားတွေ အခြေခံပြီး ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ နိုင်ငံတကာမှာလည်း နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေတွေဆိုတာ ရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအောက်မှာ လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ် အခု ရေတွင်းတူး အခုရေကြည်သောက်လို့ မရပါဘူး။ နှစ်တွေအများကြီး ယူရတယ်။ မစ္စတာ ကင်တာနားရဲ့  အခုလို အကြံပြုချက်မျိုး ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသလဲ - (၁၈) နှစ်လောက်ကြာပြီးမှ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ပြည်ပမှာ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့လူတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်းတွေ ပြုစုခဲ့ကြတာ တန် (ton) နဲ့ကို ရှိပါတယ်။ ပြုစုခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ။ အဲဒီလိုမျိုးပဲ ဒီကိစ္စတွေကို တကမ္ဘာလုံးက သိလာအောင် ပြောကြဆိုကြ၊ ဆွေးနွေးကြ၊ ရေးကြသားကြ ဆိုတာတွေ ကလည်း (၁၈) နှစ်ဖြစ်ပြီးမှ ဒါဖြစ်လာတာ။ ဆိုလိုတဲ့သဘောက အခုချက်ချင်းလုပ်လို့ မရဘူး။ တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ အရေးပေါ် တခုဖြစ်လာ မှ အခုမှ ထလုပ်ရင် မရဘူး။ ကျနော်တို့က နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းက လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်သွား ကြရမယ်။ အဲဒီလို လုပ်ထားမှ ပြောထားမှ အရေးပေါ် အခြေအနေတခု ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ အခွင့်အလမ်းတခုကို ဆုပ်ဆုပ် ကိုင်ကိုင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ မြင်တယ်။
ခင်ဖြူထွေး ။ ။ ကျမတို့ ဆွေးနွေးခဲ့တာကို ခြုံလိုက်ရင် ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ပြီးတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့  လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာ အချိန်အခါတခုကြာမှ ဖြစ်ရပေမယ့်လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ ပြောလို့မရဘူး ပေါ့နော်။ အဲဒီ သဘောလားရှင်။
ဒေါက်တာသောင်းထွန်း ။ ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့မရသလို။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီးက ခက်ခဲတယ် အနှစ် (၂၀) ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ လက်မှိုင်ချနေမယ့်အစား တယောက်နဲ့တယောက် ဟိုလူ လက်ညိုးထိုး ဒီလူ လက်ညိုးထိုး အပြစ်တင်နေမယ့်အစား ကိုယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ ကိုယ့်ရဲ့  ကျွမ်းကျင်မှုက ဘာရှိသလဲ။ ရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်ပေါ်အခြေခံပြီး လုပ်သင့် လုပ်ထိုက် တဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်နေဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ခင်ဖြူထွေး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွှန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့  ကုလသမဂ္ဂရုံးရေးရာ တာဝန်ခံ ဒေါက်တာသောင်းထွန်း ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ (၁၅) ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေ ကင်တာနား (Tomas Ojea Quintana) က ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကို တင်သွင်းခဲ့တဲ့အထဲမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြည်တွင်းပြည်ပက ဖိအားတွေကို လျစ်လျှုရှုပြီးတော့ အခု အချိန် အထိ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို စနစ်တကျနဲ့ ဆက်တိုက် ကျူးလွန်နေတုန်းဖြစ်တယ်လို့ သူရဲ့  အစီရင်ခံစာထဲမှာ ရေးသားခဲ့ပါ တယ်။ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားစေခိုင်းမှု၊ ကျေးရွာတွေကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီး၊ အမျိုးသမီးတွေကို မတရားစော်ကား မု ဒိန်းကျင့် စတဲ့ကိစ္စတွေ အပြင် ပြည်သူတွေရဲ့  အခြေခံအခွင့်အရေးတွေဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုထုတ်ဖော်ခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်တွေကို ပိတ်ပင်တာ။ ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့  အရပ်သားပြည်သူတွေအပေါ် ကျူးလွန်နေတဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ လူသားမျိုးနွှယ်တွေအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု တွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပြောင်းလဲလာအောင် ဖိအားပေးဖို့ မစ္စတာ ကင်တာနား က တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ Wednesday, September 29, 2010 အယ်ဒီတာ့အာဘော်
လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်က ရန်ကုန်နှင့် တခြား မြို့ကြီးများတွင် သံဃာတော်များ နံနက်ခင်း ဆွမ်းခံကြွစဉ်၌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများ လှူဒါန်းသည်ကို လက်မခံဘဲ သပိတ်မှောက် ခဲ့ကြသည်။ စစ်အစိုးရက သံဃာတော်များအား မလျော်မကန်ပြုမူသည့် အတွက် ဤသို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ ကြောက်စိတ်နှင့် ဒေါသက အရင်ကာလများနှင့် လားလားမျှမတူ။ ဤအရာများကို ဆွပေးခဲ့ သည်က နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သူများအပေါ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စစ် အစိုးရ၏ ဥပေက္ခာပြုမှုများပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာလူငယ်ကွန်ရက် ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပါ။
မျက်စိ ခွဲစိတ်ကုသရန် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့ချုပ် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး
တည်းခိုရာဟော်တယ်ခန်းတွင် တွေ့ရတဲ့ ဦးတင်ဦး
စတိုးဆိုင်တခုတွင် တွေ့ရတဲ့ ဦးတင်ဦး
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးဟာ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသရန် ဇနီးသည် ဒေါက်တာတင်မိုးဝေနဲ့အတူ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
(ဦးတင်ဦး တက်ရောက် ဆေးကုသမယ့် Tan Tock Seng ဆေးရုံသို့ လမ်းညွှန်)
ထို့နောက် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ဆေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူကာ ဆေးရုံတွင် တညတာ တက်ရောက် ဆေးကုသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဆေးကုသမယ့် ဆေးရုံသို့ အ၀င်)
နီးစပ်သူများရဲ့အဆိုအရ မျက်စိတွင်း သွေးယိုစိမ့်မှုကြောင့် မြင်လွှာကို သွေးကွက် ဖုံးအုပ်သွားတဲ့အတွက် အခုလို ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရတာဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးတင်ဦးဟာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း၊ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကြံ့ခိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ကောင်းသော အ၀တ်အစားများနှင့် ဦးသိန်းစိန် ၊ ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ က ကမ္ဘာကိုလိမ် ပြည်သူကိုလ်ိမ်နေကြပြီ....
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခန်းအနားတွေဆိုက ခေါင်းပေါင်းစတလူလူနှင့် တိုက်ပုံတွေနှင့် သေသေသပ်သပ် မြင်ဖူးတွေ့ ဖူးကြသည်။ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အခန်းအနားတွေဆိုလျှင် ခေါင်းပေါင်းစတွေ တလူလူနှင့် မမြင်ချင်အဆုံး ၀တ်စားဆင်ယင်ကြသည်မှာ မိစ္ဆာကောင်ဦးနေ၀င်း၏ ဖက်ရှင်သဏ္ဍန်ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ အုပ်စုကို နယူးယောက်မှာ ခေါင်းပေါင်းစတွေနှင့် မြင်နေရသည်။ တိုက်ပုံအနက်ရောင်နှင့် မြင်နေရသည်။ လွန်ခဲ့သောလက အမေရိကန်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပုဂ္ဂိုလ်က အင်္ကျီပြောင်းလဲရုံနှင့် စနစ်တွေပြောင်းသွားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လန်ဒန်မှာပြုလုပ်သောလေဘာပါတီကွန်ဖရင့်တွင် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး၏ သမီးမဝေနှင်းပွင့်သုန်ကလည်း အင်္ကျီလဲရုံနှင့် ဘာမျှဖြစ်မလာဘူးဟု ပြောလိုက်သည်။ စင်စစ်ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ အုပ်စုမှာ ရှက်စရာကောင်းလှသည်။ နိုင်ငံတကာညီလာခံတခုတွင် မြန်မာလူမျိုးပါဟု အ၀တ်အစားကို ၀တ်ပြီးလိုက်လုပ်ပြနေခြင်းမှာ လူများရီစရာဖြစ်နေသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် တိုက်ပုံအကျီင်္နှင့် သွားလာနေသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ မြန်မာသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးကအစ သာမန်သံတမန်ဝန်ထမ်းတို့ သည် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် တိုက်ပုံတကားကား ခေါင်းးပေါင်းစတလူလူနှင့် ရုံးခ်းထဲတွင် တခါမျ မမြင်တွေ့ ဖူးချေ။ သို့ အတူ ပြင်ပတွင်လည်း သွားလာနေသည်ကို မတွေ့ ဖူးပေ။ရောမရောက်လျှင် ရောမသားလိုကျင့်ရမည် ဆိုစော စကားရှိပါသည်။ မိမိရိုးရာ ယဉ်ကျေးမူကို ထိမ်းသိမ်းထားလျင် မည်သူမျှ အထင်သေးခြင်းမပြုကြ။ မိမိတို့ ရိုးရာဓလေ့များကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားပါသည်ဟု ကြေညာထားသူများဆိုက ပို၍ပင်နားလည်သင့်သည်။ ခုတော့ဘာကိုရည်ရွယ်၍ တိုက်ပုံနှင့် ခေါင်းပေါင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂညီလာခံကို တက်စေခြင်းမသိ။ နားလည်မိသည်မှာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်၍ ကတော့ `့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသောအဖွဲ့ ဆိုပြီး တက်ကြခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ မဟုတ် အရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့ ဝင် ၀န်ကြီးများဆိုပြီး အရပ်သားအ၀တ်အအစားများ ၀တ်ဆင်ကာတက်ရောက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
သို့ သော် သူတို့ မှာအရေခွံလဲထားသူများသာဖြစ်သည်။ အရပ်သားအစိုးရလည်း မဖြစ်သေး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စစ်ယူနီဖေါင်းကို ချွတ်ပြပြီး တိုက်ပုံဝတ်ပြလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယင်းကိုကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံတက်ရောက်နေသူများကလည်း ဂရုမပြု။ အရေးလည်းမစိုက်။ အထင်လည်းမကြီး ။ ပို၍ဆိုးစေသည်မှာ နယူးယောက်မှာ သူတို့ က အနောက်နိုင်ငံသားများကြားမှာ တိုက်ပုံအကျီ တောင်ရှည်ပုဆိုး ခေါင်းပေါင်းစတလူလူနှင့် ရှိနေချိန် သူတို၏ ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်က မျောက်တကောင်လို အ၀တ်အအစားတွေ ကိုးရိုးကားယားနှင့် တွေ့ မြင်နေရသည်။ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာ ဦးဥာဏ်ဝင်းက တိုက်ပုံနှင့် ရှိချိန် ဦးသိန်းစိန်က ဧရာဝတီတိုင်း လပ္ပတ္တာမြို့နယ် ကုတင် ၂၀၀ ခန့်ဆန့်ဆေးရုံဖွင့်ပွဲကို သွားရောက်ဖွင့်ပေးသည်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ အကြား တွေ့မြင်ရသည်မှာ တကယ့်ရှက်စရာမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန်ဆောင်းထားသောဦးထုပ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးနှင့် ဆောင်းသောစစ်ဦးထုပ်ဖြစ်သည်။ အရပ်သားများဝတ်ဆင်သော ရှပ်လက်ရှည်အကျီင်္ကို ၀တ်ထားပြီး ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ထားသည်။ စင်စစ် မြန်မာလူမျိုးတို့ မှာ လုံချည်သာဝတ်ဆင်တတ်ကြပါသည်။ သည်တော့ ဦးသိန်းစိန်မှာ ဖါးတပိုင်းငါးတပိုင်းလို ၀တ်စားထားခြင်းဖြစ်နေသည်။ မျက်လှည့်ပြပွဲက မျောက်ကလေးဖိုးစိန်လို ဘောင်းဘီဖင်ကျပ်ကလေးနှင့် အမြင်မှာအော့စရာဖြစ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆေးရုံဖွင့်ပွဲအခန်းအနားမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးနှင့် သွားရောက်နေသသောဦးသိန်းစိန်မှာ စင်စစ် ခေါင်းပေါင်းစတွေတလူလူနှင့် သွားရောက်သင့်သည်။ တိုက်ပုံတွေဝတ်ဆင်ပြီး မိန့်ခွန်းတွေ ပြောသင့်သည်။ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးမှူးကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှာ ယခုတချိန်တွင် ဦးသိန်းစိန်ကို အကြံကောင်း ညာဏ်ကောင်းများပေးချိန်မရလိုက်ဟု ထင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့ အဖွဲ့မှာ အမိန့် တော်ပြန်တမ်းကို မှားယွင်းစွာ လက်ခံရရှိသွားကြခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
စင်စစ်ဦးသိန်းစိန်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းသို့ သွားရောက်ရန် တိုက်ပုံနှင့် ခေါင်းပေါင်းနှင့်မှသာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ အဖွဲ့ မှာ အနောက်နိုင်ငံသားတို့ နှင့် အတူတူ ထိုင်ရ စကားပြောရ မိန့်ခွန်းပြောရမည်မို့အနောက်နိုင်ငံသားအ၀တ်အစားများကို ၀တ်ဆင်မှ သင့်တင့်လျောက်ပတ်ပေလ်ိမ့်မည်။ ခုတော့ ဦးဥာဏ်ဝင်းဝတ်စားလာပုံမှာ မန္တလေးမှ နှုတ်ခမ်းမွှေးလှူရွှင်တော်ညီအစ်ကို ဦးပါပါလေးတို့ နှင့် တူနေပါသည်။ ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးပြောကြားသောမိန့်ခွန်းတွေကိုကြည့်တော့ တကယ့်ရီစရာကြီးဖြစ်နေသည်။ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစ်ိန်မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်းထားသောဦးထုပ်ဖြင့် ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ကာ မရှိဆင်းရဲသား ဧရာဝတီကျေးရွားသူကျေးရွာသားများကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်သေးသည်။ သူပြောသည်မှာဤသို့ ဖြစ်သည်။ " နိဝင်ဘာလ ရ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီး ကျရာတာဝန်ကနေ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း ၊ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက် လူကောင်းလူတော်များ၊ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် စိတ်ထက်သန်သူများအား မှန်ကန်သည့်အသိညာဏ်ဖြင့် စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ကြပါစေရန် တိုက်တွန်းပါကြောာင်း၊ ဤရွေးကောက်ပွဲကြီး အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးသည် နိုင်ငံတော်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အပြင် နိုင်ငံသားတိုင်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကြီး ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း ကြံစည်ဆောင်ရွက်နေသူများအား နိုင်ငံတော်၊ပြည်သူနှင့် တပ်မတော်လက်တွဲ၍ ၀ိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်တားဆီးသွားကြရန် လိုအပ်ကြောင်း မှာကြားသွားသည်။ " ဟု ပြောဆိုသွားပါသည်။
ကောင်းပါပြီ ။ သည်လိုဆိုလျှင် ဦးသိ်းစိန်၏မိန့် ခွန်းကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့ ။
ပထမစာကြောင်းမှာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကြီး ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီး ကျရာတာဝန်ကနေ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း ဟု ပါရှိသည်။ သူ့ အဆိုအရ ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် ၀န်ထမ်းများကို ခြိမ်းခြောက်နေပြီး အမိန့်ပေးနေသည့် ပုံစံဖြစ်နေသည်။ သူ့ အနေဖြင့် အမိန့် ပေးခြိမ်းခြောက်၍ ရနေသောသဘောမျိုး ရှိနေသည်မှာ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေသည်။ အမှန်က သူသည်လည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ဖြစ်ရာ ယင်းစကားနှင့် မည်သို့ မျှ မဟပ်စပ်ပေ။ ဒုတိယစာကြောင်းမှာ အနာဂါတ်နိုင်ငံတော်အတွက် ဆင်ခြင်ရွေးချယ်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းပါကြောင်းဟု ဖေါ်ပြထားသည်။ ယင်းသို့ ဆိုလျှင် လူကောင်းလူတော်များကို ရွေးချယ်ရန် ပြည်သူတွေက ဆင်ခြင်ကြဖို့ ဖြစ်နေသည်။ ဤအပိုဒ်အရ ဦးသိန်းစိန်မှာ မိမိဘာကို ပြောနေသလဲဆိုသည့်အနေအထားအား မခန့်မှန်းနိုင်ခြင်မှာ သိသာနိုင်သည်။ ဤစာပိုဒ်အတိုင်းဆိုလျှင် ပြည်သူတို့သည် သူတို့ စိတ်တွင် စိတ်ကြိုက်သူများကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိနေသည်။ မဲမပေးလိုသူများကို မပေးလိုက ရနိုင်ပြီ။ တတိယအပိုဒ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကြီးပျက်စီးအောင် ကြံစည်ဆောင်ရွက်နေသူများအား နိုင်ငံတော် ၊ ပြည်သူနှင့် တပ်မတော် လက်တွဲပြီး တားဆီးကာကွယ်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်းမှာကြားသွားသည်ဆိုတော့ သူက ၀န်ကြီးချုပ်လား ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်လား ။ မည်သည့် ရာထူးဖြင့် တပ်မတော်အပေါ် အမိန့် ပေးနေသည်မှန်း မပြောတတ်။ ထို့ ကြောင့် မိမိဘာကောင်ဆိုသည်ကို အ၀တ်အစားချွတ်ပြရုံနှင့် လူတွေ မယုံကြည်ကြဆိုသည်ကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်များဆောင်းထားသော ဦးသိန်းစိန်၏ ဦးထုပ်မှာ အမှန်စင်စစ် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးနှင့် မည်သို့ မျှ မပါတ်သက်။ ဆောင်းစရာလည်းမလိုပေ။ ထို့ ကြောင့် ဆပ်ကပ်ထဲက မျောက်ကလေးလို ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစ်ိန်မှာ အမြင်မတော်ဖြစ်နေလှပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ ခန်းမတွင်မူ ဦးဥာဏ်ဝင်းမှာ မြန်မာဘာသာနှင့် ရေးထားသောစစ်အစိုးရ၏ စာတမ်းကို ဖတ်ကြားနေသည်မှာ မူလတန်းအဆင့်သာသာဖြစ်နေသည်။ ယင်းစာကိုဖတ်ကြားရာ၌ မည်သည့်အကြောင်းအရာမျှ ထစ်ငေါ့စရာအကြေင်းမရှိလှ။ မြန်မာဘာသာနှင့်ရေးသားထားသည်ကို မြန်မာစကားနှင့် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သော ဦးဥာဏ်ဝင်းမှာ ဘာကြောင့် ထစ်အ ဆွံ့အ နေမှန်းမပြောတတ်။ ယင်းနေ့ မှာပင် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးသမီးလေး မဝေနှင်းပွင့်သုန်က လန်ဒန်လေဘာပါတီကွန်ဖရင့်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့် ပါတ်သက်၍တက်ရောက်စကားပြောခွင့်ရခဲ့သည်။ မဝေနှင်းပွင့်သုန်ှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ထောင်ထဲတွင် ထောင်ဒဏ်( ၇၅ ) နှစ်ကျခံနေရသော ဦး မြအေးမှာ သူမဖခင်ဖြစ်ပြီး သူမဖခင်ကို မည်သည့်အခါမျှ မြင်တွေ့့ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ကြောင်း။ ဗြိတ်သျှ အစိုးရမှကူညီဝိုင်းဝန်းပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခြင်းနှင့် ကုသမဂ္ဂအတွင်းရေးချုပ်အနေဖြင့် ဘာကိုမျှ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည်ကို ၀န်းနည်းပူဆွေးစွာ တင်ပြပြောဆိုသွားပါသည်။ တကမ္ဘာလုံးမှ ကြည့်ရှုနေကြသော မဝေနှင်းပွင့်သုန်၏ အဂ်လိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောနေသောစကားကို မြင်တွေ့ ရသောသူတို့ မှာ မျက်ရည်များကျကာ ခံစားရပါသည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း သပိတ်မှောက်ကြောင်းကို ကြေညာပေးလိုက်ရာ တက်ရောက်လာသူများက အထူးအားရ၀မ်းသာစွာဖြင့် လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကာ အားပေးကြပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ကုလသမဂ္ဂညီလာခံခမ်းမထဲတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းမှာ မြန်မာစာကို ကြည့်ဖတ်၍ပင် မရဖြစ်နေရာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှာ လူပေါင်းမှားနေပါပြီ။ ဤမျှအသုံးမကျသောအစိုးရအဖွဲ့ မှ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ ကို လူကောင်းလူတော်ဟု မည်သူက သတ်မှတ်နိုင်ကြပါမည်နည်း။ ဦးသိန်းစိန်၏စကားအတိုင်းဆိုလျင် လူကောင်းတော့ မဟုတ်သလို လူတော်လည်း မဖြစ်နိုင်ကြသောသူများကို အစိုးရအဖွဲ့ တွင် ထားရှိနေသည်မှ အံ့ဘွယ်ဖြစ်နေသည်။ ထို့ ကြောင့် လူတော်မဟုတ်သော သူတို့ ကို မဲမပေးကြရန် ပြည်သူတွေက သတိထားဖို့ လိုသည်။ ပြီးတော့ နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာ ပြောထားသကဲ့သို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက နိုင်ငံတော်။ပြည်သူနှင့် တပ်မတော်တို့ က ဆန့်ကျင်တားဆီးပိတ်ပင်သွားကြရန် ပြောကြားသွားသည်မှာ သဘာဝကျပါသလားဟု စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
သူ့ မှာ..ယင်းသို့ ပြောပိုင်ခွင့်ရှိနေပါသလား။ ရှိနေသည်ဆိုလျှင် ကုလသမဂ္ဂမှာဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ တိုက်ပုံတကားကားနှင့် လုပ်ပြနေခြင်းမှာ လူအများရယ်စရာဖြစ်သွားရပါပြီ။ အရေခွံလဲသွားတာပါဟု ပြောခြင်းမှာ လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ကောင်းသော အ၀တ်အစားများကို ခုံခုံမင်မင် နှင့် ၀တ်ပြနေသော ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ နှစ်ဦးမှာ ကမ္ဘာကို လိမ်နေကြပြီ။ ပြည်သူတွေကို လိမ်၍အားမရကြသည်လားတော့မပြောတတ်။ ကမ္ဘာကိုလာ၍လိမ်လာကြသည်။ သို့ သော်ကမ္ဘာမှ သိရှိပြီးသားမို့သူတို့ ဘာဘဲလုပ်လုပ် ဂရုမစိုက်ကြမှန်း နအဖစစ်အစိုးရက ခုအချိန်ထိ မရိပ်မိသေးဟု ထင်သည်။ သို့ သော် နအဖဖစစ်အစိုးရက ရိပ်မိထားသည်မှာ တခုတော့ ရှိနေသည်။
ယင်းကားချက်ချင်းကြီး ဖြုတ်ချခံရသွားမည့် အခြေအနေကို တမုဟုတ်ချင်းရောက်သွားနိုင်ကြောင်း ရိပ်မိထားသည်မှာ အဓိကပြသနာဖြစ်နေပါကြောင်း။။။။။။။
“ မဲထည့်စရာ အကြောင်းမရှိ “
Warning: Lyrics may be offensive to some people.
Click HERE to download above song in (.mp3) format (For slower connections).
Click HERE to download above song in (.wma) format (For moderate connections).
Click HERE to download above song in (.wave) format (For high speed connections).
Melody - မိုးမိုး
Lyrics / Vocal / Harmony / Instruments Accompany & Arrangement - မျိုးချစ်မြန်မာ
Strings & Sax - ဖိုးတာ
Recording Mastered & Mixed Down @ Myo Chit Myanmar Studio, California, U.S.A
Produced By - Myo Chit Myanmar HD Media Production
TV မှာ ရေဒီယိုမှာ လိမ်ညာ စကားလုံးတွေနဲ့ အတင့်ရဲ ဗြောင်ပေါရဲတယ်
နိုင်ငံတော် ကယ်တင်ရှင်တွေ သူတော်စင်တွေ စောင့်ရှောက်မှဘဲ တစ်ခါထဲ အကုန်မွဲသွားတယ်
အားလုံးက ရတဲ့ပိုက်ဆံ ဗျောင်ခိုးနေကြတယ်
အိမ်ကြီးတွေ ခြံကြီးတွေ ကားသစ်ကြီးတွေနဲ့
မဆလ ခေတ်ကထက်တောင် ပိုဆိုးနေသေးတယ်
ဗမာတစ်ခေတ်မှာ ဖာဖြစ်တာ နအဖ ကျေးဇူးဘဲ
CHO: မဲထည့်စရာ အကြောင်းလဲမရှိ
ဒီလိုသာ ငြိမ်ခံနေရင် တို့အကုန် ကျွန်ဖြစ်လိမ့်မယ် / တို့အကုန်ကျွန်ဖြစ်မယ်
ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ် အော်မယ်ကြံရင် လိုက်ခဲ့ ဘယ်လဲ… ထောင်ထဲ… နှစ်လေးငါးဆယ်
ပြည်သူကိုကူညီပြန်ရင် ရန်သူတွေလို သတ်မှတ်နေခဲ့ တမင်လဲ ငြှိုးထားတယ်
ပြန်မလွှတ်ပါ ရန်စွတ်ရှာ ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့
ဟိုလဲမပါ ဒီလဲမလာ တားမြစ်လို့ဖိနှိပ်ထားတယ်
TV မှာ ရေဒီယိုမှာ လိမ်ညာ စကားလုံးတွေနဲ့
မဲထည့်စရာ…. အကြောင်းလဲမရှိဘူး မင်းသိသင့်တယ်
မဲထည့်စရာ…. ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး ဒါမင်းသိသင့်တယ်
Moe Moe, Wyine Suu, Phoe Tar, my lovely wife Snow, USCB & all Hollywood celebrities that participated in this campaign for Burma and most importantly, ALL MY WONDERFUL FANS that supported me all along.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/28/20100အကြံပြုခြင်း